Bogga ugu weyn » Caafimaadka Warka » Sinopharm COVID Talaalka? Dadka ku dhaqan Seychelles way walwalsan yihiin, sidoo kale WHO
Sinopharm COVID Talaalka? Dadka ku dhaqan Seychelles way walwalsan yihiin, sidoo kale WHO
Seychelles waxaa loola jeedaa xeebaha quruxda badan iyo meelaha loo dalxiis tago, waxay ka dhigan tahay cagaar oo aan ciriiri lahayn oo ammaan ah
Seychelles waa waddanka ugu tallaalka badan adduunka, laakiin infekshinka COVID-19 ayaa kor u kacay. Sababta waxaa laga yaabaa inay uga timaado Shiinaha tallaalka Sinopharm ..
Dalxiiska wali amaan ayuu kuyahay Seychelles, laakiin muwaadinka caadiga ah ee Seychelles wuu walwalsan yahay - wuxuuna heystaa sabab macquul ah.
Saraakiisha ugu sareysa Shiinaha ayaa qirey bil ka hor in Sinopharm uu leeyahay qiime hooseeya oo wax ku ool ah.
Sinopharm waa tallaalka COVID-19 ee laga sameeyay Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha lana siiyo inta badan Seychelles taasoo ka dhigaysa waddanka jasiiradda waddanka ugu tallaalka badan adduunka.
Shiinaha ayaa dhoofinayay talaalkeeda Sinopharm. Laba dal oo ku tiirsan dalxiiska ayaa badiyaa dadkooda ka tallaalay Sinopharm: Maldives iyo Seychelles.
Maanta Jamhuuriyadda Seychelles waxay diiwaan galisay 314 kiis oo cusub dalka gudihiisa in ka yar 100,000 oo qof. 5,658 oo ka mid ah wadarta 8,172 Kiisaska Coronavirus tan iyo markii cudurku faafay wuu soo kabsaday. 28 qof ayaa ku dhimatay.
Seychelles waxay tallaashay 62.2% dadkeeda, waana in ka badan waddamada adduunka oo dhan. In kabadan 37% waxay heleen laba duritaan.
In kasta oo kiisasku inta badan khafiif ahaayeen, laakiin shalay haweeney Seychelles ku dhimatay ka dib markii ay heshay laba tallaal oo ah Tallaalka Shiinaha
Tallaalka Shiinaha ka sokow, tallaalka Hindiya waxaa laga xukumay jasiiradda Badweynta Hindiya.
Sidaa darteed waxay cabsi ku tahay dad badan oo ku nool Seychelles in kiisaska firfircoon ee COVID-19 ay labanlaabmeen usbuucii hore.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxay ugu jawaabtay sida hay'adaha xafiisyada dowladda oo kale ay uga jawaabi doonaan, iyagoo sheegay in tallaalka ku guul darraystay aan la go'aamin karin qiimeyn faahfaahsan.
WHO waxay xiriir toos ah la leedahay maamulka Seychelles.
Maamulaha Golaha Dalxiiska Seychelles Sherin Francis ayaa sidaa u sheegay eTurboNews: